China Fitbit flex စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက်အလေးချိန် elastic လက်ကောက်ဝတ်သည် ကွမ်းခြံကုန်း
fitbit flex များအတွက်အလေးချိန် elastic လက်ကောက်ဝတ်တီးဝိုင်း
အမျိုးအစား:အားကစားလက်ကောက်ဝတ်, လက်ကောက်ဝတ်သိုင်းကြိုး, လက်ကောက်ဝတ် Brace
လိင်:Universal, လက်ကောက်ဝတ် Band
ဝန်ဆောင်မှု:OEM / ODM, လက်ပတ်နာရီ
ထုတ်ကုန်အမည်:Fitbit Flex အတွက်အလေးချိန် Elastic Wrist Band
ထုပ်ပိုးခြင်း -1 PC / Opp အိတ်, 100 PC / Carton, Carton အရွယ်အစား: 40 * 50 * 60cm
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား:တစ်လလျှင် 300000 အပိုင်းအစ / အပိုင်းအစ
Supply နိုင်ခြင်း:တစ်လလျှင် 300000 အပိုင်းအစ / အပိုင်းအစ
အလေးချိန်အလေးချိန် လက်ကောက်ဝတ် Band fitbit flex များအတွက်: •မြင့်မားသော elastic ဖိုင်ဘာအထည်၊ ပျော့ပျောင်း။ သက်သောင့်သက်သာရှိသောအထည်၊ Tourmaline သည်လက်ကောက်ဝတ်၏အဓိက acupoint ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ လက်ကောက်ဝတ်၏အောက်ခြေတစ်သျှူးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုမြှင့်တင်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်လက်ကောက်ဝတ်နှင့်မြေအောက်ခန်း၏နာကျင်မှုဆီသို့ ဦး တည်သည့်ကုထုံးနှင့်အရန်ကုထုံးရှိသည်။
1. အပြင်ဘက်ပစ္စည်း: မြင့်မားသော elastic နိုင်လွန်အထည် အတွင်းပိုင်း 2. ပစ္စည်း: tourmaline အထည် ၃။ ပုံစံ: အရွယ်အစား (Aofeite Wrist Support (AFT-H004)) 4. အရွယ်အစား: တစ်လောကလုံး 5. အလေးချိန်: 0.12kg / pair တစုံ 6. ထုပ်ပိုး: 1 pc / PE အိတ်, 70 ကိုအပိုင်းပိုင်း / ပုံး 7. ပုံးအရွယ်အစား: 36 * 72 * 38cm ၈။ ပစ္စည်းပစ္စယအလုံး ၂၀၀ (ဝတ်လစ်စလစ်ထုပ်ပိုးခြင်း) (၉၀)၊ 9. အရောင်: အနက်ရောင်, အပြာနှင့်အဝါရောင် 10. လက်မှတ်: CE / FDA က / ISO9001 / ISO13485 ၁၁ ။ လက်ကောက်ဝတ်နာကျင်မှုလျှော့ချကူညီပေးသည် မင်းလက်ကောက်ဝတ်ကိုထောက်ပံ့ပါ 12. OEM: ရရှိနိုင်ပါသည်
Fitbit Flex ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအတွက်အကောင်းဆုံး Elastic Wrist Band ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Weight Wrist Band အားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Elastic Wrist Band ၏တရုတ်မူလစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ: Wrist Brace
ပူးတွဲနာကျင်မှုအတွက် Compression Sleeves Brace Support
ခြေကျင်းပံ့ပိုးမှု Brace အားကစားအင်္ကျီလက်